Madaxweynayaasha Hir-shabeelle iyo Puntland oo heshiis gaar ah wada gaaray. – Shabakadda Somalibile Media
Madaxweynayaasha Hir-shabeelle iyo Puntland oo heshiis gaar ah wada gaaray.
Intii Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare uu ku sugnaa Magalada Garoowe waxaa uu kulamo mira-dhalay la qaatay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, iyaga oo kala saxiixday dhowr heshiis.
Afhayeenka Maamulka Hir-Shabeelle Daa’uud Xaaji Cirro ayaa sheegay in heshiiskaas uu ahaa mid ay ku wada hehsiiyeen Madaxweynayaasha Puntland iyo Hir-Shabeelle, isla markaana uu goobjoog ka ahaa Wasiirka Amniga Hir-Shabeelle Cabduqaadir Aadan Jeelle.
Waxa uu sidoo kale sheegay Afhayeenka in sidoo kale Madaxweynayaasha ay isla soo qaadeen iskaashi la xiriira Amniga, Federaaliisimka iyo Ganacsiga intaba.
Kulankii fashil ku dhamaaday ee Garoowe ka dhacay ayaa waxaa ay fursad u noqotay maamulada Koonfur Galbeed iyo Hir-Shabeelle oo heshiis dhinacyo badan taabanaya la galay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.